China isina yakarukwa yemvura machira emagadziri uye vatengesi
China isina yakarukwa yemvura machira
Kazhinji yakagadzirwa kubva polypropylene, isina kurumwaLandscape machira zvakanyatsokodzera kudzivisa kukura kwemasora mukukara kana nzira dzinotora kana mibhedha. Asina manyorenwscape machira anokosha kupfuura zvisarudzo zvakarukwa, saka ivo vanodzivirira mvura uye zvinovaka muviri kubva kune ivhu pazasi. Iyi machira anopa kugadzikana kukuru uye kudzivirira matombo kubva pakunyura muvhu.
Chii chinonzi machira emvura?
Zvakanakisa zvisina mwero wepamhepo machira anovakwa kubva kune isina ruchimbo kana kuti yakagadzirwa seyakagadzirwa seti simbi ine maburi akashata kuti abvumire mvura. Dzimwe Brands dzinopa UV dziviriro kuchengetedza hupenyu hwemucheka. Inouya muRoll, kazhinji kanokwana 1M paupamhi uye chero kupi kubva ku25m kusvika ku100m, kana kupfuura, pakureba. Cherekedza kuti zvese zvinokambaira zvimiro zvinofukidzwa neye mulch ye chero type-typs tips, gravel, yakagadzirwazve rubber nugtes, nezvimwe.
Zvakanakira zvevasina kurwadza nzvimbo yemucheka:
Inochengetedza marara emukati uye marara asingadiwe sematombo kubva pakugadziriswa muvhu. Nepo maturusi akadai sechiputi uye akagadziridzwa anodzoserwa rubber anopa hunyanzvi hwekutenderera pamiti yemiti yemiti yemiti yemiti yematare.
Inodzivirira kuti mbeu dzakavigwa muvhu riri pasi pehukama. Mbeu dzinoda mwenje uye mhepo kuti ikure, asi kana masora madzimbiso imbomira pasi peganda renzvimbo isina vanhu
Inokanda kukosha kwekushandisa mishonga yemasora yekudzora. Havasi vese varimi vane gung-ho kuti vashandise makemikari miganho mumiganhu yavo uye maruva, kunyanya kana vane mhuka dzinovaraidza uye vana vanotamba muyadhi. Nekushandisa nzvimbo yemamiriro ekunze, kudiwa kwemakemikari emakemikari akaderedzwa kana kubviswa.
Inobatsira kuchengetedza ivhu unyoro nekudzikisa kubuda kwemvura. Zuva nemhepo vanobatsira vakuru, izvo zvinogona kusiira ivhu rakaoma, saka kushandisa yakanakisa isina maronda echirume pamusoro pevhu ichabatsira kuti varambe vakanyorova muvhu.
Inopa kumwe kudzora kwekudzora pamawere pasi pasi pekubva kune mvura yakawanda. Semi-inobvumirwa mhando dzemachira emamiriro ezvinhu anotendera imwe nyoro kuti uone kuburikidza asi chengetedza iyo ivhu kubva kumvura iri kumhanya pasi, iyo inogona kukonzera kugura.
Pp spunbond isina ruchengo
45gr to 150gr
1m x 25m kana yakagadzirirwa
dema, brown, chena
UV Dziviriro, BioDogradable, Mhepo Inotarisirwa
roll yakazara nekupisa shrink firimu uye yakagadzirirwa label
100% Spunbond PP Non rakarukwa Fabric Waterproof Non rakarukwa For zvekufuga Furniture Non dzakarukwa Fabric Roll nokuda Guangdong, China
Rayson - Factory Inopa 100% PP isina mwaka weFenicha Sofa Cover Flow matture Pocket isina rukava isina kuchena fenicha
Rayson - Mattress Ticking Moth-Chiratidzo PP Spunbond Asina Akarukwa Nguo isina Njere Cold Cold Firs Firs Isine Machira asina hunyanzvi
Rayman - Fenicha Mattress Kugadzirwa Kwechiratidzo Pocket Asina Machira Machira Polypropylene 100% mitsva midziyo isina mwaka wechifuma isina kuchena
Direct ikatengesa kuraswa PP spunbond nonwoven mabhanzi kuti fenicha zvinhu zvakanaka mutengo 100% mhandara p nonwoven jira Guangdong, CHINA
Rayson - PP Spunbonded Non rakarukwa Fabric 60gsm (OEM) For Furniture / pasofa / metiresi Cover Furniture nonwoven jira
Furniture Non rakarukwa Fabric Spring metiresi Pocket nemhepo Perforated Spunbonded Non dzakarukwa Fabric nokuda Guangdong, China
Flower kurongedza Wholesale Non rakarukwa Fabric Mabhuku eBraille the warp Material For Flower nokuda Guangdong, China